Ithegi: iidilesi ze-imeyile | Martech Zone
Maka: iidilesi ze-imeyile
NgoLwesine, Julayi 12, 2018 NgoLwesine, Julayi 12, 2018 Douglas Karr
Ngaba ujonga i-imeyile ethile ekujolise kuyo kodwa awazi ukuba ungayifumana njani? I-FindThatLead ineenkcukacha ezigciniweyo zeedilesi ze-imeyile kunye ne-interface yokubuza kunye nokuzikhuphela ukuze zikhangeleke. Ngaba kusemthethweni? Ngokwenyani, ewe. Zonke ii-imeyile zenziwe nge-FindThatLead's algorithm esekwe kwiipateni, okanye ezifumaneka kwiindawo zikawonkewonke kwiwebhu. Uyifumana njani iThatLead Prospector works Select segmentation - Khetha phakathi kwezinto ezahlukeneyo ukuze ukhangele ngakumbi
Kuxhomekeka ekubeni ubuza kubani, i-imeyile ibikho kangangesithuba seminyaka engama-30 ukuya kwengama-40. Ixabiso laso licacile, ngokusetyenziswa kwezicelo kuzo zombini izinto zentlalo kunye nezobugcisa. Okubonakalayo, nangona kunjalo, yindlela ubuchwepheshe be-imeyile obungaphelelwa lixesha ngayo. Ngeendlela ezininzi, i-imeyile iphinda ifunyenwe ukuze ihlale ihambelana neemfuno ezikhulayo zabasebenzisi banamhlanje. Kodwa uhlala ucinga ngento ngaphambi kokuba uvume ukuba ixesha lidlulile?